Abenkomo kahaga babuyele ezinqoleni - Bayede News
Abenkomo kahaga babuyele ezinqoleni
Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal
Uphenyo: Sidalula ubufakazi bezinhloli uZuma agabe ngabo
Odokotela bathi sekungabe ukuchitha isikhathi ukuqinisa imigomo
Bathi buphelile ububha eMnambithi ekhaya ledayimane
Basola umgolo abama-Uber nabamaBolts kwabamatekisi
Ime nse iNhlokodolobha ngoLwesibili
Ungabazane ngokhetho: Kulokhu abe-IEC bayesaba ukukhomba inxeba
AboHlanga bebefundile futhi bekhaliphile
Sebenzisa okuningi ngakini ukuze uzuze ngokomnotho
Masingabulalani siqedane sodwa ngenxa yoguquko olungemukeleki kalula
Ingane encane ibona ogombelakwesakhe emva kukaRamaphosa – umbhali
Umgubho wenyanga yentsha
Intsha nezethembiso zosopolitiki ezingafezekile
Inkantolo yaseSwitzerland igwebe owaseLiberia iminyaka
Isinxephezelo sowahlukumezeka e-Equitorial Guinea
Amabutho avale umngcele yize kunemizamo yobumbano
Libonakala liza mawala igagasi lesithathu lokhuvethe eDRC
Uhlelo lokuphuthumisa ukugomela ukhuvethe e-USA
UMengameli wase-USA uhlela umhlangano nowaseRussia
Seziqalile izivivinyo kuHulumeni omusha wase-Israel
Isikapakela nasembuthweni wezempi eyezinkinga eLebanon
Selubekiwe oluzocacisa ngekusasa likaNetanyahu
I-Iran emizamweni yokugxamalaza ekuvuselelweni kwesivumelwano
Umthelela wokunqoba kukaPashinyan ebudlelwaneni ne-Azerbaijan
Imizamo yokubuyisana phakathi kweSpain nabaseCatalonia
Uthole elinye ithuba ku-UNGA
Sesivaliwe isahluko samacala empi yaseBosnia
Nani maNdebele kanibancinyane
Ungayini umlando weshashalazi ngaphandle kwakhe?
Nembala izinsuku kazifani uma esefikile
Ugqugquzela isiko lokufunda
Asikhiphe umqondo wobukoloni kwezobuciko
Ukuphokophelela kwelenyoni kuzovezwa umdlalo wakhe kuthelevishini
Masidonse kanye kanye: Ukusebenzisana nezitolo ezinkulu kugqamisa abasiki bengqephu boHlanga
Iso lomthwebuli: Amehlo axoxa indaba, yize isifonyo
Intsha mayigxile esikweni layo nasemikhubeni yakwabo
Imindeni yakhiwa ngenhlonipho nangezimfundiso eziqamathekile
ISihlalo singesabaphilayo nabafabengafi
Isihlangu lesi akumgexe kepha ngumlando
ISILO uZwelithini sishiywa ngunina esamphiwa yiziNyandezulu
USomahhashi uyawuthemba Umvoti kuhlungelwa iGladAfrica
Ifuna ukuzicabela indlela eya kowamanqamu iChiefs koweCAF
Inkakha ibona iChiefs inganqoba ekuhambeni kowase-Afrika
Ubona itshegugu uSpencer kuNjabulo elidinga ukuba lilolongisiswe
Ezamankomane sezinosihlalo omusha waseKZN ezihlalweni ezimbili
Umcintiswano wezikole wavumbulula ikhono losengundabamlonyeni kwezokusubatha
Izingqwele kwelombhoxo zidlala okokuqala emveni kokunqoba
Yagxamalaza inkunzi: Imidlalo yeBlue Bulls ingasukulunye
Ulobizela ukuqopha umlando wabambalwa kwezomphebezo uDjokovic
Isinqumo sika-Naomi sokuhoxa kuFrench Open sesekwe ngabaningi
Iyamkhuthaza indlela abadlala kamuva abeProteas umqeqeshi
Ukuzwelana nempilo yowoHlanga kugqamile kukhilikithi emdlalweni odlule
Usefinyelele ezingeni lomhlaba elawula ngempumelelo ikhilikithi owoHlanga
Phansi umshiza: Usethi khumu u-AB kwelesizwe
Inhlangano iPSL ayikhombisi ukuba nomgogodla, yethembela ezinkantolo
Inkunzi isematholeni: IBafana Bafana kufanele ibunjwe yinjejane
Isizini yokuqala yeDStv ibe yimpumelelo
Ungomunye walabo abenze kahle kule sizini kanobhutshuzwayo uKante
NGEZIKHATHI zempi lapho babedudulana khona naboHlanga kanye namaNgisi, abenkomo kaHaga (amaBhunu) babeneqhingasu elabe libasiza futhi libenza banqobe.
Balisebenzisa ngesikhathi belwa nempi yeNdunduma yaseMgungundlovu, iNgonyama uDingane. Lapha kwakuthi nxa bebhekene nesitha bahlehlele ezinqoleni (laager) nababethi bangangena kuzo babe nendlela ekahle yokubuka nokuqotha isitha.
Le ndlela yokulwa yaba wuphawu lobuqhawe nobunye kumaBhunu neyasetshenziswa njengegama lokuwakhomoza uma kunento okumele bayenze njengesizwe. Mhla beba nofuduko (Great Trek) ngonyaka we-1835nowe-1846, babesebenzisa izinqola nokuze kube yimanje ziluphawu lobunye kubo.
Eminyakeni emihlanu eyedlule kube sobala ukuthi iningi lamabhunu lizithola lingaphansi kwengcindezi njengoba imilomo yabe isivunana ezweni odabeni lomhlaba oselungundaba mlonyeni kumaqembu aboHlanga kusuka ku-Afriican National Congress ( ANC) kuya kwiEconomic Freedom Fighters (EFF). Njengokwejwayelekile uma ezibona ehlaseleka amabhunu ayabumbana enze into eyodwa nokuwenza anqobe.
Udaba lokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo kubukeka kuyilo olwenze amabhunu abamunye njengoba bekunokhetho.
Kuthe kusa ngoLwesine sekuphuma izibalo abaningi bamangala ngokwenza kahle kweFreedom Front Plus okuyiqembu ebelingabhekiwe kakhulu, kwazise uma kucatshangwa abamhlophe okhethweni kuvamisile ukuthi bayamaniswe neDemocratic Alliance.
Okhethweni olwedlule ngowezi-2014 leli qembu eliholwa uMnu uPieter Groenewaldt owayeyiMeya yaseSterkfontein lathola amavoti ayizi-165 715 lathola izihlalo ezimbili ePhalamende kodwa aliphelanga Amandla ngoba noma belingenalo iningi kodwa uGroenewaldt ubebamela labo abamvotela.
Ngesikhathi sokuloba lapha izolo iFreedom Front Plus ibisendaweni yesine kusabalwe amavoti angama-42% kuzihola phambili i-African National Congress ngama-56%, kulandele iDemocratic Alliance (DA) ngama-24%, i-Economic Freedom Fighters (EFF) isendaweni yesithathu ngmaphesenti ali-9.2%.
IFF Plus iyavuma ukuthi udaba lomhlaba nalokho abakholelwa kukhona ngokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo yikhona okubenze bawumazibuthe kubalandeli abangamabhunu.
INhloko yokhetho kuleli qembu uMnu uWouter Wessels uthi bathinte imizwa yabantu abaningi abakholelwa ukuthi ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo akunabulungiswa futhi i-ANC,
I-EFF nabanye abeseka lo mthetho baphambene nomthetho “Sikwazile ukuletha izinkulungwane zabantu ezikhungweni zokuvota ngoLwesithathu, futhi sikwazi ukuthola nabathu abasha abasivotele. Nakuba besinezihlalo ezincane ePhalamende sense konke futhi sikhombisile ukuthi siyiqembu eliphikisayo. Asizange sigudluke kwinqubomgomo yethu njengeqembu noma bekukhona izivunguvungu,” kusho uWessels.
Umhlaziyi wezepolitiki ozinze eNyuvesi iNelson Mandela uMnu u-Ongama Mtika uthe okunye okubonakala kusize iFF Plus kulolu khetho ukungabi nozinzo kweDA nezimpi zayo zangaphakathi.
Uthe iDA yazibophezela ekubeni yiqembu elivulelekile nokudoba kakhulu aboHlanga okuyinto enhle kodwa eyilimazile kwabamhlophe abakholelwa ukuthi leli kwabe kuyiqembu elinezinsika zabelungu.
“Kuyacaca ukuthi amanye amavoti amaningi eFF Plus aphume kulabo ababengamalungu eDA.”
Izinkantolo seziyikhaya lesibili ku-ANC
Okunye akuvezile athe kuyisizile ekutholeni amavoti ukuyisa iBlack Land First (BLF) enkantolo ifuna ukuba ikhishwe iKhomishini Yokhetho ikhiphe ohlwini lwamaqembu azongenela ukhetho emuva kokuba umholi wayo uMnu u-Andile Mngxitama ethe bayiqembu laboHlanga kuphela futhi ababafuni abelungu nezinye izinhlanga.
Noma izinto zisazoshintsha kakhulu ngokungena kwamavoti asemadolobheni, kodwa izibalo zikhomba ukuthi maningi amathuba okuthi leli qembu ligcine lingelesine kwaphikisayo. Le ndawo phambilini bekuhleli kuyo I-IFP. Esifundazweni iGauteng nakhona leli qembu lisenza kahle, izolo ntambama belisendaweni yesine.
UGroenewald usanda kuzakhela ugazi nasemphakathini wamaKhoi San kuleli ethi kumele abhekelelwe kancono ngomhlaba. Okunye abakubekayo nokube yizithembiso zokhetho njengokuthi bafuna kwehliswe isibalo songqongqoshe kube neminyango eli-16 abantu kubonakala bekwamukele.
Okuqukethwe kumqulu wezethembiso waleli qembu ukuthi omasipala bakwazi ukuzilawulela iziphehli zikagesi kungabi u-Eskom ngoba izinkinga eziningi zidalwa nguye. Udaba lokunqamuka kukagesi namanje lusengundabamlonyeni ezweni okungangokuba bekunovalo lokuthi kungenzeka nangosuku lokhetho.
IFreedom Front Plus yasungulwa ngoNdasa wezi-1994 sekusele amasonto ambalwa kubanjwe ukhetho lokuqala. Yasungulwa owayengumkhuzi wezempi uGeneral uConstand Viljoen, emuva kokuphuma enhlanganweni yamaBhunu I-Afrikaner Volksfront.
Ekusungulweni kwayo kwakungelona iqembu lezepolitiki, kodwa ngoMbasa we-1994 uGeneral Viljoen walibhalisa kuKhomishini Ezimele Yokhetho. Ngokhetho lokuqala lathola izihlalo ezili-9 ngamavoti angama-500 000.
Eminyakeni engama-25 ikhona isibe nabaholi abathathu, emuva kukaGeneral Viljoen kwangena uMnu uConnie Mulder ngowezi-2001 njengoba sekunguGroenewald. Ngokwesekwa ngale ndlela kulolu khetho iFF Plus isiqalile ukuthumela umyalezo ngokuthi izoba yiqembu eliphikisayo elinamandla elikumelayo lokho elikholelwa kukho. Kule mpumelelo yalo kuze kube manje abaholi bayo bathi kusesekuseni ukuthi sebengabhiyoza ngoba izinto ziyaguquka.
nguMfo waKwaNomajalimane May 9, 2019
Omunye umlando waboHlanga usekujuleni kolwandle
Izogezelana kungekudala: AMakhosi nomasipala empini yamareythi